အထည်ချုပ်အချို့ အော်ဒါပြတ်သဖြင့် လုပ်သားအင်အား လျှော့ချ၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြ? - Yangon Media Group
အထည်ချုပ်အချို့ အော်ဒါပြတ်သဖြင့် လုပ်သားအင်အား လျှော့ချ၊ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြ?
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအချို့တွင် အော်ဒါ ပြတ်လတ်မှုများကြောင့် လုပ်သားအင်အားလျှော့ချမှုရှိလာသဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာသည် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မိုးက ဆိုသည်။
လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်သုံးလခန့်က အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတက်မလာနိုင်ဟု မှန်းထားခဲ့သော်လည်း ဒေါ်လာဈေးတက်သည့်အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ၍ Buyar များ၏ အထည်ချုပ်ခဈေးနှုန်းများလျှော့ချခြင်း၊ အထည်အော်ဒါပြတ်လတ်ခြင်းတို့ကြောင့် လက်ရှိ၌ စက်ရုံအချို့က လိုင်းအလိုက် လုပ်သားလျှော့ရသည့် ပြဿနာများရှိလာကြောင်း ဒေါ်ယဉ်ယဉ် မိုးကပြောသည်။
”ပြီးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကတော့ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက စိုးရိမ် စရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးလလောက်က အခြေအနေပေါ့။ ဒါကိုအခုပြန်ပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့လည်း အလုပ်လက်မဲ့တက်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိဘူးလို့ အဲ့ဒီလိုပဲ မှန်းထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အစ်မကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေလုပ်နေတာ။ ဒါပေမဲ့တိုးချဲ့တာကို ရုတ်တရက်တိုးချဲ့ ပြီးကာမှ ထိတ်လန့်စိုးရွံ့တဲ့အခြေ အနေမျိုးနဲ့ပြန်ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်သားအခြေခံလစာက တကယ်တမ်း နိုင်ငံတကာရဲ့ အခြေခံလစာနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူများတိုင်း ပြည်ထက်နည်းနေသေးတဲ့ အဆင့်အခြေအနေမှာရှိနေသော်လည်းပဲ ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့ Skill က လိုက်တက်ပြီးတော့ ပြည့်မီမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆန္ဒပြမှုတွေကလည်း တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Buyar တွေ ရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်း အားနည်း လာတယ်”ဟု ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မိုးက ပြောသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအချို့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဟုဆိုထားပြီးမှ မလုပ်ဆောင်တော့ခြင်း၊ Buyar များ၏အော်ဒါသည် ဂျော်ဒန်၊ အီသီယိုးပီးယားစသည့် နိုင်ငံများဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို ပြန်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မိုးကပြောသည်။ ”တချို့ Buyar ချဖို့သိပ်မယုံ တာတွေရှိလာတယ်။ သိပ်ပြီးမတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့ ဒါကို ငါတို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံက အဲ့လောက်ထိမဆိုးပါဘူး။ အ ခြေအနေကောင်းပါတယ်လို့ ရှင်း ပြပေမယ့် သူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အ တိုင်းအတာရှိမှအော်ဒါချတယ်။ အဲဒီမှာမှ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ တိုးသွားတဲ့အပေါ်မှာ ငါတို့က ပေးရတဲ့လစာကို တွက်ချက်ပြီး ချုပ်ခကို ပိုတောင်းတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အခြားဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့၊ ကမ္ဘော ဒီးယားတို့တောင် အဲ့လောက်မ ပေးရဘူးဆိုပြီး Buyar တွေက နှိုင်းယှဉ်တယ်။ တို့တွေက အဲ့လောက် မှမရရင် မချုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး တင်းခံတော့ အော်ဒါတွေက အဲ့ဒီနိုင်ငံ တွေဆီကို ရောက်သွားတယ်။ ပြော ရရင်လုပ်ခတိုးကတည်းက ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာတာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါက်တာခင်မောင်အေးက ပြော သည်။
ထိုနည်းတူ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစာရင်းအရလည်း စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားအလုပ်ထုတ်ခံရမှု၊ လုပ်သားအင်အားလျှော့ချခံရမှုများ ကြောင့်ဖြစ်သည့် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားပြဿနာများသည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေရပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ဖုယွင်အထည်ချုပ်စက်ရုံသည်လည်း အလုပ်သမား ၃ဝ ဦးကို လုပ်သားအင်အားလျော့ချခဲ့သဖြင့် လုပ်သား၂ဝဝ ခန့်က အလုပ်ပြန်ခန့် ပေးရေးတောင်းဆိုလျက်ရှိရာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရက် တစ်လခန့် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သည့်တိုင် ပြေလည်မှုမရရှိသေးပေ။
ဟောင်ကောင်နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီး မြန်နှုန်းမြင့် မီးရထားလမ်း စတင်ဖွင့်လှစ်
ထရန့်နှင့် အာဘေး မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး
ကာဒစ်ဖ်နှင့် ပွဲအတွက် လေယာဉ်ဖြင့် လက်စတာ ခရီးနှင်မည်မဟုတ်
တောင်ကိုရီးယားအလုပ်စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် မတ်လ ရောင်းချမည်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ပြီး KTV ၌ အလုပ်လုပ်စဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ မြန်မာနိုင်ငံသူ သံ